Qoyska Boqortooyada UK ayaa la sheegay inay “dhibsadeen” go’aan ay shaaciyeen Amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan oo ah inay ka fariisanayaan xilalka heerka sare ah ee ay u hayaan Boqortooyada. | Hubsad News
Qoyska Boqortooyada UK ayaa la sheegay inay “dhibsadeen” go’aan ay shaaciyeen Amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan oo ah inay ka fariisanayaan xilalka heerka sare ah ee ay u hayaan Boqortooyada.
January 9, 2020 - Written by weryayaasha shabakada hubsad
Lamaanaha ayaan go’aankan ka talo-gelin xubnaha sar sare ee Boqortooyada ka hor inta aanay shaacin, sida ay ogaatay BBC.
Amiir Harry iyo Meghan ayaa war qoraal ah oo ay Arbacadii shaaciyeen ku sheegay inay go’aanka gaareen ka dib “muddo bilo ah oo ay ka baaraandegayeen, si hoose na ay uga xaajoonayeen”.
Waxa ay sheegeen inay “doonayaan inay ka fariistaan xilalka “sare” ee ay ka hayaan qoyska Boqortooyada ayna ka shaqeyn doonaan sidii ay dhaqaale ahaan uga madax bannaanaan lahaayeen”.
Laamanahan ayaa qorsheynaya inay waqtigooda u kala qeybiyaan UK iyo Waqooyiga Amerika, iyagoo “ilaalinaya waajibaadka ka saaran Boqorada iyo dalalka Barwaaqa Sooranka”.
Dickie Arbiter oo mar warbaahinta u qaabilsanaa Boqoradda ayaa sheegay in arimaha aan weli kala caddeyn ay ka mid tahay cidda sugaysa ammaankooda.
“Ma ciidamada Scotland Yard ayaa ilaalinaya sida ay haddaba sameeyaan? Mise ciidamada Canada ayaa sugi doona ammaankooda? Yaa se bixin doona dhaqaalaha lagu sugayo ammaankooda?” ayuu weydiiyay Mr Arbiter oo u warramayay barnaamijka Newsnight ee BBC-da.
Penny Junor oo wax ka qorta arimaha qoyska Boqortooyada ayaa sheegay in hab dhaqanka lamaanaha uu shabaho kii amiirad Diana oo ah Harry hooyadii. Waxa ay intaa ku dartay in go’aanka aanay kala tashan xubnaha kale ee qoyska ay tahay “arin aad u fool xun”.
“Markii ay Diana kala tageen seygeedii [Amiir Charles], waxa ay si lama filaan ah u shaacisay inay iska casishay shaqada ay u haysay 50 hay’adood oo samafal ah, iyadoo aan cidna kala tashan.” ayay tiri Penny.
Image captionHarry iyo Meghan waxay isbuucii hore London kula kulmeen diblumasiyiin sare oo u dhashay Canada
Waxaa in muddo ah soo if-baxayay astaamo muujinaya in Amiir Harry iyo xaaskiisa aanay ku faraxsaneyn noolasha Boqortooyada.